Ny Dahalo sy ny Fokonolona
2012-09-08 @ 10:36 in Ankapobeny
Sanganehana ihany miatrika ny zavamisy amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ilay hoe tsy azo anoharana isika ankehitriny. Maro zavatra tokony hotantaraina saingy tsy hita izay holazaina. Amin'izao fotoana izao no tokony hanjaka tokana ny haino aman-jery satria tsy hisy olo-tsotra mpampita vaovao any amin'ny toerana tena itrangàn'ny voina. Hafa ny fitantarana izay nitranga fa hafa ihany koa ny fanehoan-kevitra amin'ny zava-misy; fomba fijery no tena fototry ny tantara. Dia ahoana? tsy manan-kambara mihitsy ve?
Anisan'ny nanaitra tamin'ity raharaha atrehina ity ny nahenoana voalohany fa an-jatony ny dahalo manafika, ny anarana Remenabila no tena malaza na aiza na aiza. Nisahotaka ny olona nefa ho aiza moa fa misintaka ny tanàna fotoana vitsivitsy dia miverina any amin'ny misy azy indray. Nalaza fa nisy ny hetsika nataon'ny mpitandro ny filaminana, saingy toa ny tanànan'olona betsaka no nodorana rehefa tsy nahitana mponina tao. Nilaza moa ny manamboninahitra nitarika ny hetsika sy nampandoro tanànan'olona fa mba tsy hiverenan'ny dahalo amin'io toerana io no nandoroana ny tanàna, izany hoe efa nosokajiana ho dahalo avy hatrany izany ny mponina tao. Tsy fantatra ny fihetseha-pon'ny olona na mety noho ny fandrahonana hoe handroba ny... tsy dahalo... na... dahalo karazany hafa sy matanjaka kokoa no ho avy ka naleony nilefa sy nanavotr'aina, fa ahiako hisy fifampiangana ny andaniny sy ny ankilany tao anatin'iny hetsiky ny tafika izay niala teo an-toerana noho ny "repli strategique" lasa fiteny malaza.
Variana ihany koa ny besinimaro eto an-drenivohitra rehefa mifanafika sy mifamely ny ao amin'ny tafika sy ny dahalo toa vitsivitsy ihany no voa, ain'olona tokoa ireny ary tsy azo lavina fa matetika dia tsy mihoatra ny folo no maty, nefa naninona no ny fokonolona no mifanafika amin'ny dahalo no saiky nahatratra zato no maty? Misy baraingo mipetraka eo ambony lohan'ny tsirairay nefa izay mponina sy efa niaina ihany ary mahalala ny fomba fisainan'ny olona any amin'ny misy ity toe-javatra mampalahelo ity no manana ny antony ka mba ambarako etoana. Tsy avy any atsimo aho ary tsy nipetraka any fa ireo avy any no nohenoina ka nitantara.
Voalohany, manamarika izy ireo fa mbola misy sy miasa izany odigasy izany. Tsy kitoatoa na habobo ny andrenesana fa toa mandalo fotsiny amin'ny dahalo ny bala maro atifitra azy ireo, hoy ny mpitantara. Raha misy ny fifanandrinana aza gaga raha sendra zavona tampoka ianao, natao iny tsy ahitanao iza misy ireo dahalo sy mitoky amin'ny odiny. Odibasy no ananan'izy ireo ka tsy mahagaga raha vitsy no matiny. Fa fahasahiana kosa no tena miasa rehefa atao "iray sy iray" amin'ny fitaovam-piadiana tsy mipoaka ny ady. Avy amin'ny fifanandrinana mivantana tsy misy basy no tena maro ny maty. Nahoana?
Fanaon'ny dahalo rehefa hanafika izy ny mampilaza mialoha, tsy resabe izany fa lasa fananon-dry zareo io ho fanindriana izay tafihina hiomanany raha mahavita miomana ry zareo. Eo no manapa-kevitra ny mponina na handositra na hiatrika ny fahavalo, raha handositra dia efa manaiky resy izay. Raha hiatrika ny fahavalo kosa dia tena ady toy ny tamin'ny ady lehibe faharoa no atrehina: rehefa tsy mahafaty izay mifanandrina amiko aho dia izaho no maty. Tetika iray iatrehan'ny mponina ny dahalo na mpanafika hafa ho avy dia izao: Ny lehilahy matanjaka sy mahery rehetra no voalohan-daharana amin'ny ady amin'ny fahavalo, tsy misy mahazo mihemotra na mandositra fa ny manenjika sy miaro tena ihany no azo atao. Ao aoriana kosa ny zaza amam-behivavy sy ny antitra ary mandrisika ihany koa ireo voalohan-daharana. Raha misy mandositra ireo lehilahy mahery dia ny ao aoriana, izany hoe ny zokiolona sy izay malemilemy indray no mamono azy, izany hoe ireo mpiray tanàna aminy ihany. Nahoana? koa izy mahery aza lasa mandositra mihemotra koa haharo tena ve ireo heverina ho malemy sy tsy afa-miaro tena ao afara? Noho izany samy miaro ny ainy avokoa ny rehetra. Koa raha ho faty ihany tsy aleo ve maty miady amin'ny fahavalo toy izay maty vonoin'ny mpiray tanàna noho ny tahotry ny ho faty? Lasa manana hery fiarovana ny ainy tsy ho faty eo amin'ny mpiaro ny tanàna ka vita hatramin'ny mahafaty olona maro. Amin'ny fahasahiana fampilazana mialoha dia tsy maintsy valiana fahasahiana mafimafy tsy matahotra ny ho faty intsony na inon-kidòna na inon-kihatra, ny fokonolona no manana izany toe-tsaina izany fa tsy ny miaramila sy ny zandary izay manao ny fiarovana ny tanindrazana ho KARAMA fa mba miaro ny ainy tsy ho "fatifaty foana" ihany koa. Resy lahatra aho fa marina io fitantarana nataon-dry zareo io.
Aiza ho aiza ny Fitsarana sy ny fanadihadiana? Ataoko fa tsy miteny intsony izany rehetra izany rehefa ny aina no arovana. Ny mahavariana amin'ity resaka ity dia ny finiavana hanakely hatrany ireo miaramila sy zandary alefa any an-tany fiadiana fa ny fiarovana ny lapan'Ambohitsorohitra indray no nakana mpiambina an-jatony. Tezitra avokoa ny olona ary misy aza moa ny miteny hoe na arivo aza no hiambina azy eo rehefa samy hanavotra ny ainy dia ny ainy ihany no avotany fa tsy hisy hiaro izay mpibaiko izany eo. Misy tetika eo matoa atao vitsy ny any an-tany fiadiana fa samy miandry hoe inona moa izany no tena tadiavin'ireo mpitarika ny fitandroana ny filaminana hanakelezana isa ireo irahina ireo? Sa sanatria avy amin'ireo mpibaiko ireo ny lohan'ny dahalo mandravarava etsy sy eroa ireo?
Jentilisa 8 septambra 2012